Atao mandresy Rajoelina
2018-12-20 @ 10:28 in Politika
Ninia aho ny tsy nanoratra nandritra ny fihodinana faharoa, nidina teny an-kianja ary nanentana ny olona hifidy ny #25 na Marc Ravalomanana. Mbola nanantena ihany aho fa hitandro ny fahamarinana sy tsy hanaiky hilefitra intsony manoloana ny fanitsakitsahana ny lalàna nitranga tamin'ny fihodinana voalohany ny tompon'andraiki-panjakana tamin'ity fihodinana faharoa ity. Saingy indrisy moa...
Tamin'ny fihodinana voalohany, ny tatitra navoakan'ny vahiny mpanaramaso ny fifidianana nilaza ny andro sy ny toerana nanaovan'ny sasany fizaràm-bola, izay tokony miteraka fanintsanana avy hatrany ilay kandidà, raha tena ampiharina tokoa ny lalàna, saingy tsy natao izany satria matanjaka sy manana hery (izay mety ho afaka ny mitam-piadiana) mihitsy aza dia naleony nitandro ny filaminana ihany ary mba asiana kosa ny fihodinana faharoa. Nisafidy ny fitoniana ambony afo mahamay ny fahefana mpitsara teo amin'ny sehatry ny fifidianana. Ny voka-pifidianana nataony anefa hanao randra-tarihana amin'izay mety ho fanapahan-kevitra ara-pitsarana rehetra, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fifidianana, manaraka rehetra eo. Vao maika nahazo vahana ny "mpividy olona" na tsy nanao fampielezan-kevitra mavitrika intsony aza... satria olona efa voavidiny moa ho afaka hankaiza intsony.
Tonga ny fihodinana faharoa, nitombo ny hadalàna nataon'ny sasany, nisy ireo vatom-pifidianana tena izy tratra tany amin'ny toerana tsy tokony hisy azy velively. Nalaza tamin'izany ny tao Ambohipo. Nisy ireo olona nasaina nangala-bato nitolo-batana tany amin'ny kandidà nifaninana sy nanambàra fa nasaina nitety biraom-pifidianana nitondra kara-pifidianana sy kara-panondro izay tsy azy ireo. Nisy ny fijoroana vavolombelona nataon'ny lehiben'ny distrika roa (araka ny skyone) nilaza fa noteren'ny lehibeny tsy maintsy hampandany ny #13 na Andry Rajoelina. Raha tsy diso aho dia ny minisitry ny atitany izany lehibeny izany. Io minisitra io ihany no re fa nampanao karapanondro miisa 500.000 tao amin'ny tranompiritim-pirenena. Ny CENI re fa nampanao kara-pifidianana miisa 12.000.000 nefa ny mpifidy latsaky ny 10.000.000, atao inona izany ny 2.000.000 fanampiny.
Tety ankilany, nisy ny artista sady depiote nanao karazana ramatahora tamin'ny fitsidihana biraom-pifidianana maro tao an-drenivohitra tao. Maro ny tranga tokony ho azo tantaraina, izay tokony ho porofo fa tena tsy mety mihitsy ilay fanapahan-kevitra mbola nampifaninana olona tokony ho efa nahintsana. Na amin'ny fanatanjahantena' toy ny vikiina in-telo miantoana, na ny vikin-dava ohatra, dia misy ny tsipika tsy azo itsahan'ny atleta intsony rehefa mitsambikina izy satria tsy madio intsony ny lalao raha ekena ny vokatr'iny vikina nanitsaka ilay tsipika tsy azo itsahina iny. Hiharihary fa ho lasan'iny atleta nanitsaka ny tsy fanitsaka iny ny amboara rehefa tsy notsofina tamin'ny fahadisoana nataony izy, saingy tsy hanaiky izany ny fitsarana tsy miangatra raha vao mahita ny tsi-fanarahan-dalàna izy amin'ny ankapobeny, ary foana avy hatrany ny halavitana vitany. Fa tsy mba toy izany kosa ny fomba fitsarana (fifidianana) teto amintsika tamin'ny fihodinana voalohany. Vokany lasa mahazo vahana tanteraka ny mpandika lalàna ary tsy menatra ny miteny fa tsy maintsy izy no mandresy.
Takaitra tsy ho afaka eo amin'ny taranaka malagasy intsony ny vokatr'izany rehetra izany, ary efa tsy madio intsony ny lalao... izay efa tsy nadio hatramin'ny fihodinana voalohany. Araraotina ny fanontaniana izay tsy nahasahian-dRajoelina novaliana hoe hanaiky ny voka-pifidianana avoakan'ny HCC ve, tamin'ilay fihaonan'ny roa tonta tamin'ny fandaharana manokana ho eny Iavoloha raha nanaiky tanteraka kosa Ravalomanana. Dia tonga amin'ilay tsoa-kevitra hoe aleo atao mandresy ilay mahavita manakorotana ny firenena fa tsy hanaiky ho resy izany mihitsy sady ilay mety ho mandresy efa manaiky resy rehefa izay no avoakan'ny fitsarana sady tsy mahay manakorontana ny mpanaraka azy. Fehin'izany rehetra izany no nahatonga ny lohatenin'ity lahatsoratra bilaogy ity hoe "Atao Mandresy Rajoelina".